क्यारी लामले सुरक्षा कानूनकाे अधिकारहरूलाई लिएर चिन्ता गरे...... - Bagaicha.com
Rajeshwori Sunuwar १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:०२
कानूनले देशद्रोह, विद्रोह र विकृतिलाई प्रतिबन्ध लगाउनेछ। आलोचकहरूले यो शहर को स्वतन्त्रता सीमित हुनेछ भन्छन्। तर उनको साप्ताहिक प्रेस सम्मेलनमा, लामले कानून पालन गर्ने बहुमतलाई जोगाउने “जिम्मेवार” कदम भएको बताइन्। उनले कानूनलाई हङकङर्सको अधिकार घटाउने कुरा अस्वीकार गरे यी अधिकारहरू – हङकङको मिनी संविधानमा रहेको बेसिक कानूनमा राखिएको छ – यो १९९७ मा बेलायतले चीनलाई फिर्ता हस्तान्तरण गरिसकेदेखि स्थापित भएको हाे। आधारभूत कानूनले इलाकामा केही स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ, जस्तै विरोधको अधिकार, जुन मुख्य भूमिमा अवस्थित छैन। हप्ताको अन्तमा, गत बर्ष देखिएको प्रदर्शनको संक्षिप्त फिर्ता आएको थियो, हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएपछि पुलिसले अश्रु ग्याँस चलाए।
कानून के भइरहेको छ?
यो वास्तवमै कानून बनेको छैन तर एउटा प्रस्ताव – जसलाई “ड्राफ्ट निर्णय” भनिएको छ – यस हप्ता चीनको रबर स्ट्याप संसद, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) मा मतदान हुनेछ। एक पटक त्यो मत पारित भएपछि, प्रस्ताव एक मस्यौदा कानूनमा प्रकाशित गरिनेछ र जुनको अन्त्यसम्म लागू हुनेछ। यो घोषणा भएदेखि नै यसले अन्तर्राष्ट्रिय तवरले कडा आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ, तर लामले भने कि अन्य देशहरूले “यस व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै ठाउँ छैन”। कुनै पनि देशले त्रुटिपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा कानून बर्दाश्त गर्ने छैन, उनले भने, र हङकङ, चीन को एक हिस्साको रूपमा, भन्दा फरक थिएन।
उनले कसरी सरोकार सम्बोधन गरे?
लामले बारम्बार भने कि त्यहाँ कुनै विस्तृत विवरण थिएन, तर चीनको “ड्राफ्ट निर्णय” को पाठले जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्छ। उनले विगत केही दिन जनताबाट आएको सकारात्मक प्रतिक्रियाको बारेमा पनि बोलेकी थिइन, “ती विदेशी राजनेताहरूले के भनिरहेका छन् भनेर उडेर जान्छन्”। उक्त विधेयकले आतंकवाद वा उपक्रममा संलग्न “मुट्ठीभर व्यक्ति” लाई लक्षित गर्ने बताएको छ, र यसका बारे चिन्तित कोही पनि पूर्ण विवरण जारी हुनको लागि कुर्नु पर्छ। हङकङको स्वतन्त्रता, जीवन्तता र मूल मूल्य “त्यहाँ रहिरहनेछ”, उनले भने, “तर अधिकार र स्वतन्त्रता पूर्ण हुँदैन।” कानुनले हङकङको स्थिति क्षति नगरी, विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्रको रूपमा बढाउनेछ, उनले भने कि ती डरहरूलाई “पूर्ण आधारहीन” भने। यस चिन्ताको विषय पनि छ कि कानूनले चीनलाई हङकङमा आफ्नै कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू स्थापना गर्न शहरको आफ्नै साथ प्रदान गर्न सक्दछ। सुश्री लामले डर व्यक्त गरे कि यसले विद्रोहमा भाग लिने व्यक्तिको “कल्पनाशक्ति” भएकोमा विद्रोहको साथ पक्राऊ हुन सक्ने डर थियो।
कठिन समय आलोचकलाई मनाउन
क्यारी लामले जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजे कि कानूनले “अवैध अपराधीहरूका साना समूह” लाई मात्र लक्षित गर्दछ – तर जानकारीको लागि दबाब दिँदा थोरै मात्र प्रस्ताव गर्न सक्दछ। त्यो पनि उनको रक्षा को प्राथमिक लाइन हो। उनले बारम्बार भने कि बेइजिङ्गले पेश गरेको प्रस्तावको भावना चिन्ताको कारण नभएको र शहरले वास्तविक कानूनको विवरणहरूको लागि पर्खनु पर्ने। तर नेतासँग कठिन समयका लागि विश्वस्त आलोचकहरू हुनेछन्। सम्मानित हङकङ बार एसोसिएसनले यो चेतावनी गरिसकेको छ कि नयाँ कानूनले नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको प्रावधानलाई अनुपालन गर्ने कुनै आश्वासन छैन। आठ भन्दा बढी व्यक्तिको सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गर्दै आइतबारको प्रदर्शनहरू, महिनौंमा सबैभन्दा ठूलो थियो। कानूनको “सकारात्मक प्रतिक्रिया” आएको छ भन्ने लामको विश्वासको बाबजुद पनि त्यहाँ पहिलेभन्दा बढी विरोधको लागि आह्वान गरिएको छ र कति ठूलो हुनेछ कसैलाई थाहा छैन।
पृष्ठभूमि के हो?
हङकङले गत वर्ष महिनाैँ बढ्दो हिंसात्मक प्रदर्शन देखेको थियो र यो विधेयकले उब्जाएको हो जसले आपराधिक अपराधीहरूलाई मुख्य भूमि चीनमा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिने थियो। अन्ततः खारेज गरियो तर त्यो चरणमा हङकङको लागि बढी प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको लागि आह्वान गरिएको प्रदर्शनको बिरोध बढेको थियो। यद्यपि ती आन्दोलनहरूको अन्त्य भयो तर केही हदसम्म स्वतन्त्रता समर्थक समूहहरूले स्थानीय चुनावमा उल्लेखनीय लाभ उठाए पनि यस क्षेत्रमा मुख्य-मुख्य भूमि विरोधी भावना अझै कायम छ। आधारभूत कानून अन्तर्गत हङकङ यसको आफ्नै आन्तरिक मामिला र सुरक्षाको लागि जिम्मेवार छ। यो सँधै आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा कानून पारित गर्न को लागी थियो तर कहिले पनि हुन सकेन किनकि त्यस्ता कानूनहरू यति लोकप्रिय थिएनन्। त्यसैले आलोचकहरूले यसलाई बेइजिङ्गको हङकङमा आफ्नै संस्करण हिंसात्मक वर्षपछि थपेको प्रयासको रूपमा हेर्छन्। वीवीसी
कोभिड–१९ बारे अनुसन्धान गर्न
फुटको जोखिममा नेकपा……
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई भने :
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई भने : म र राष्ट्रपतिविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको छ तपाईहरुको कित्ता क्लीयर गर्नुस्……
थप २३२ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि……